June 16, 1881: kufa kwemupristi vodou Marie Laveau - AFRIKHEPRI
16 June 1881: rufu rwevapristikadzi vodou Marie Laveau
Idzo Zvidzidzo Gumi Zvekubudirira uye Rugare Rwomukati - Wayne Dyer
kugashira VAFARIDZI VAFRICA
New Orleans (Louisiana) yaiva imwe yezvinyorwa zvechitendero cheVodou muUnited States. Vodou yakaiswa muNew Orleans mukutanga kwezana remakore regumi nemapfumbamwe, yakatumirwa nevaranda - asiwo "isina ruvara" - avo vakatevera vafundisi vavo veFrance vachitiza Haiti Revolution. Kufanana neHaiti "cousin", vodou yeNew Orleans yaiva syncretism yechitendero cheKaturike, iripo muLouisana - uye zvitendero zvechiAfrica.
Mufundisi, Marie Laveau aiva mumwe wemifananidzo yeVoodoo yeNew Orleans. Akazvarwa akasununguka mu1794, Marie Laveau akanga ari mwanasikana weBlanc uye weCreole, izwi iro muLouisana rakagadza vanhu vane mavambo kamwechete veAfrica, Europe uye Native America (Nhengo). Mune 1819, Marie Laveau anowanidza Jacques Paris, muHaiti akapinda mushure megore mushure mekutambudzika. Mukadzi wechidiki akave vabati vemizambiringa kune vashandi vanochena vatsvene uye mukoti munguva yehuvha fever yakawirwa neguta. Yaiva panguva iyi Marie Laveau akaiswa kune mishonga uye kushandiswa kwemishonga yemishonga. Nhamba shoma yehupenyu hwaMaria Laveau inozivikanwa. Aive mupristakadzi we voodoo ainzi uye aitya - zvose nevevanhu vemazuva uye nevevatsvene-avo mhemberero yakwezva vazhinji vakatendeka. Mudzimai webhizimisi akachenjera, anonyanya kuzivikanwa mune zvemari uye rudo. Marie Laveau akazova mudzimai asingatauri waChristopher Glapion, musoja waaiva nawo nevana 15. Uyu mararamiro asina kukodzera pakati peVhite uye Free Free yakanga yakajairika muNew Orleans uko "mazera emarudzi" akaroorwa.
Marie Laveau akafira iyo 16 June 1881. Mamiriro ekufa kwake anosiyana zvichienderana nekwaakawana. Mamwe mapepanhau panguva iyoyo airatidza kuti akawanikwa akagurwa musoro vamwe pavakazivisa kuti akafa muhope. Dzimwe runyerekupe dzakamutsa kuvapo kwake mutaundi maawa mashoma mushure mekuziviswa nezverufu rwake. Mumwe wevanasikana vaMarie Laveau, anonziwo Marie, akatangazve basa rake rehupristi. Mumwe munhu anozivikanwa mutsika yeNew Orleans, Marie Laveau anovigwa muguva reSanta Louis uko guva rake rinoramba richingoshanyirwa.
Yaya Angelika, mukadzi-chirimwa
Yaa Asantewa, vahosi amai veAsante umambo
Vhura Izwi - Rugwaro (2017)